စိတ်ကူးပျော်ရာ: ဆိုလာ တပ်ကြမယ် (Home Solar System)
ဆိုလာ တပ်ကြမယ် (Home Solar System)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဘာသာရပ်/အတတ်ပညာကို စိတ်ဝင်စားဆောင်ရွက်လာကြသော ယခုခေတ်
ကာလတွင် မြေအောက်သယံဇာတမှထုတ်ယူသော လောင်စာနှင့်မောင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အစား နေနှင့် လေတို့မှ ထုတ်ယူမှုနည်းပညာများကို လူတို့စိတ်ဝင်စား လာခဲ့ကြသည်။ နေရာင်ချည်မှ လျှပ်စစ် ထုတ်သော နည်းပညာမျာလည်းအလျင်အမြန် တိုးတက်လာကြသည်။ နေ၏စွမ်းအင်သည် အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သော စွမ်းအင်( renewable energy/ sustainable energy) ဖြစ်ပေသည်။ နေသည် သဘာဝကပေးထားသော မကုန်ခမ်းနိုင်သော အကြီးမား ဆုံးသောပင်မ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကြီးဖြစ်ပေသည်။တိုးတက်သောနိုင်ငံများတွင် solar power ကို လုပ်ငန်းဌာနအများအပြားတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲနေ ကြပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်လည်း Solar PV Module များလည်း ဈေးကွက်တွင် စတွေ့နေရပြီး လျှပ်စစ် စွမ်းအား ရှားပါးသော၊ခက်ခဲသော နေရာဒေသ များတွင် စတင်သုံးစွဲနေ ကြပါပြီ။ Solar Power System တည် ဆောက်ရန် ကနဦးမတည်စရိတ်ကြီးမြင့် သော ကြောင့် လူတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေသေးပေသည်။ မည်သို့ဆိုစေ မကြာမီကာလအတွင်းလူတို့သည် Solar Power System ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြတော့မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။
ရွာကအမေ့အိမ်မှာဆိုလာတပ်ပေးဘို့ကြိုးစားရင်း ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာမိခဲ့တယ်။ တွက်ချက်ပုံကအစ-တပ်ဆင်ပုံအဆုံးနည်းပညာကိုမေးခဲ့ပေမဲ့လည်း စိတ်ကျေနပ်အောင် ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက အဖြေမပေးနိုင်ခဲ့ကြဘူးလေ ...
သို.အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် မိမိအိမ်သုံး Solar Power System တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောနည်းပညာ၊ တွက်ချက်မှုများကို ကိုက်တိုင်ကိုယ်ကျ စနစ်တကျ တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်လေ့လာ ထားသလောက်ကို တင်ပြ/ဝေငှ ချင် ပါသည် ။
Solar Power System တခုတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပါဝင်သောပစည်း၊ အစိတ်ပိုင်းများမှာ ဆောင်ရွက်မည့် အိမ်/နေရာဒေသ ဆောင်ရွက်မည့်စနစ်နှင့် အသုံးချမည့်အခြေအနေတို့ပေးမူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနား နိုင်ပေသည်။ သိုကသော်လည်းSolar System တခုအတွက် မရှိမဖြစ်ပါဝင်ရမည့် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများမှာ အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
General configuration of Solar Power System
(၁)- ဆိုလာပြား ( Solar Photovoltaic Module or PV module) ။ ။ နေရောင်ချည်ကို DC လျှပ်စစ်သို့ ပြောင်း လဲပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် ပါဝင်သော semiconductor တို့ပေးအခြေခံပြီး၃)မျိုးခွဲခြား ထားသည်။
(က) Crystalline Silicon PV Module( c-Si )
၄င်းတွင် Single Crystalline(monocrystalline) နှင့် Multi-Crystalline(Polycrystalline) ဟူ၍(၂)မျိုးထပ်ခွဲထားသည်။ polycrystalline သည် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲပေးမှုမှာmonocrystalline လောက်မ ကောင်းပေ။သို.သော်လည်း စွမ်းအင်ပြောင်းလဲပေးမှု(Conversion Efficiency) မှာမြင့်မားပြီး ပျှမ်ူမျှအားဖြင့် 10 – 12% ရှိသည်။
(ခ) Amorphous Silicon PV Module( a-Si)
ပါးလွှာပြီး c-Si ထက်အလင်းစုပ်ယူမှုပိုများသည်။ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာရသော၊ စွမ်းထုတ် ပေးမှု များစွာမလိုအပ်သော အသုံးချမည့်နေရာများအတွက် သင့်တော်သည်။ Conversion Efficiency မှာ 6% ဖြစ်သည်။
(ဂ) Hybird Silicon PV Mopdule
c-Si Monocrystalline ကို a-Si ဖြင့်ပတ်လည်မှရံပြီး တည်ဆောက်ထားသော အတွဲဖြစ် သည်။ အလင်းအနည်းအကျဉ်း(သို့)တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စရာမလိုဘဲနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ Hybird Silicon PV module သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး Conversion Efficiency မှာ 17% ဖြစ်သည်။
(၂)-Solar Charge Controller ။ ။ ဆိုလာပြားမှထုတ်ပေးသောလျှပ်စစ်(voltage & current) ကို ဘက်ထရီအိုး ထဲသို့သိုလှောင်ရာတွင် ညီညွတ်မျှတအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ solar charge controller ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် over charge မဖြစ်စေရန်ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
(၃)-Inverter ။ ။ ဘက်ထရီအိုးထဲရှိ DC လျှပ်စစ်ကို ACလျှပ်စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
(၄)- Battery ။ ။ဆိုလာပြားမှထုတ်ပေးသော DC လျှပ်စစ်ကိုသိုလျောင်ထားရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
(5)-Load(Appliances ။ ။ မိမိတို့အသုံးပြုမည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအားလုံး (ဥပမာ -မီးလုံး၊မီးချောင်း TV Computer )
Solar PV System တခုတည်ဆောက်ရန် အတွက် အောက်ပါတို့ကိုစဉ်းစား တွက်ချက်ရပါမည်။
မှတ်ချက် --- ပုံရော၊စာရော၊တွက်ချက်ပုံရောဆိုရင် post ကအတော်ရှည်သွားမယ် ။ ဒါကြောင့် ဆိုလာကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်
attached file ထဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးလိုသလိုသုံးကြပါဗျာ.. upload ကအဆင်မပြေလို့ Google Buzz က link ကိုထဲ့ပေးလိုက်တယ်။ A4-24ရွက် .jpeg ပြောင်းတင်ထားတယ်။ အဆင်မပြေခဲ့ရင်ပြန်ပြောကြပါအုံး ......
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 12/11/2011 08:18:00 AM
ဇမိုဇော် May 28, 2012 at 3:44 AM
Win Naing December 19, 2012 at 1:38 PM
လင့်က This post could not be found.
Your URL may be incorrect, the post may have been deleted, or this account may not have access to the post. ပြနေတယ်...ပြန်တင်ပေးပါဦးဗျာ...mail နဲ့ ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ winnaing.eng@gmail.com ပါ...ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကို လတ် December 25, 2012 at 4:12 AM
ပို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လင့်ကသေနေလို့ အသစ်ပြန်တင်ပေးပါလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့ mail ထဲပို့ပေးပါလား
george May 26, 2013 at 2:05 AM
nat ywa thar November 17, 2013 at 7:24 AM
ဘာဖောင့်တွေမှန်းလည်းမသိဘူး။ ဖတ်လို့လည်း မရဘူး။ ဘယ်လိုမှကို ဖတ်လို့ အဆင်မပြေဘူး ဆရာရေ...။
mg dway December 5, 2013 at 8:59 AM
ဖတ်လို့မရလို့ပါ ဆရာ ပို့စ်လေးတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ
KO January 15, 2014 at 2:55 AM
အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါဦးဗျာ အိမ်အတွက် လက်တွေ့ solar တပ်ချင်လို့ပါ ပို့ပေးနိုင်ရင်တော့ kosoeko35@gmail.com ကို ပို့ပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
love chit thu love July 12, 2015 at 12:12 AM